Hlaziya i-MEP (oomatshini, ugesi kunye nemibhobho) Ikhosi-iGeofumadas
Ikhaya/Izifundo ze-AulaGEO/Hlaziya ikhosi ye-MEP (oomatshini, oMbane kunye nokuCocwa kweMibhobho yamanzi)
Zoba, uyile kwaye ubhale amaxwebhu eenkqubo zakho ngeRevit MEP.
Lungiselela imibhobho yakho
Bala ngokuzenzekelayo iidayimitha
Uyilo lwendlela yokusebenza komoya woomatshini
Yenza kunye nokubhala iinethiwekhi zakho zombane
Yenza iingxelo eziluncedo nezinengcali
Ngale khosi uyakufunda indlela yokuthatha ithuba kwezi zixhobo ukuze inkqubo yoyilo lweenkqubo zokwakha ikhawuleze, isebenze ngakumbi kwaye ikumgangatho ophezulu.
Isoftware yohlaziyo yeyona nkokeli iphambili kuyilo loyilo isebenzisa i-BIM (iModeli yoKwakha iiModeli zoKwakha), ivumela iingcali ukuba zingavelisi izicwangciso kodwa zilungelelanise yonke imodeli yokwakha kubandakanya neempawu zoyilo. Uhlaziyo lwe-MEP luyilelwe ukubandakanya izixhobo zoyilo lwezixhobo.
Xa unika iiprojekthi zeMEP kwiprojekthi, unga:
Yenza i-network yombhobho ngokuzenzekelayo
Yenza ukubala kokulahleka koxinzelelo kunye noxinzelelo lwe-tuli
Nika ubungakanani bemibhobho
Ukuphucula uhlahlelo kuyilo lobushushu lwezakhiwo
Ngokukhawuleza yenza kunye nokubhala iinethiwekhi zombane wasekhaya
Ukuphucula ukusebenza kwakho xa usebenza kwimodeli ye-MEP